မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – ဦးတည်လားရာက နောက်ပြန်လှည့် ရင်.. ဥပဒေလဲ နောက်ကြောင်းပြန်ကြစို့ ….. | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – ဦးတည်လားရာက နောက်ပြန်လှည့် ရင်.. ဥပဒေလဲ နောက်ကြောင်းပြန်ကြစို့ …..
အခြေအနေ အဖြစ်အပျက်က နောက်ကြောင်းပြန်လှည့် နေပြီလား ?…
အရင်လို ညှဉ်ဆိုး စရိုက်ဆိုး တွေနဲ့ ဇာတိပြတော့ မှာလား ?…
ထူးထူးထွေထွေ ရေးသား သုံးသပ်ပြရန်မလိုအပ်တော့ ပါ ၊၊
လက်ရှိ အာဏာပိုင်အကြီးအကဲ နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့  စီမံခန့် ခွဲမှုအောက်မှာမရှိတဲ့ 
ကာကွယ်ရေးနဲ့  လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့  အကြီးအကဲ ကာချုပ် ရဲ့ တိုက်ရိုက်အမိန့် ကို
နာခံ ဆောင်ရွှက်နေတဲ့  ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကို…ကိုယ်တိုင်
လူသူရှေ့  စကားထွက်ပြောရပြီဆိုတော့ 
စိုးရီမ်ရေမှတ်ရောက်နေပါပြီ…၊ရွှာရန် ရာခိုင်နှုန်း ပြည့် နေပါပြီ….၊၊
အယောင်ဆောင် စစ်အာဏာရှင်တပိုင်း အစိုးရလက်ထက်…
လူမြင်ကွင်းရှေ့ မထွက်ခဲ့ ဖူးတဲ့  ကန့် လန့် ကာ နောက်ကွယ်က သံလက်သီး
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး တယောက် ကမန်းကတန်း ထိပ်ထိပ်ပြာပြာ လူ့ မြင်ကွင်းရှေ့ 
ထွက်ပေါ်လာတာ ကြည့် ရင်တော့  သွေးလေ ခြေက်ခြားနေပြီ…
ကရှူးမူးတူး ထင်ရာမြင်ရာ ဆိုင်းတော့ မယ့် သဘောလို့  မြင်မိပါတယ်….၊
တပ်မတော်သားအဖြစ် အစပြုကထည်းက ….
“ငါတို့ ဟာ အရာရှိ…နောင်တချိန် တိုင်းပြည်အတွက် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မယ်..
တိုင်းပြည်အတွက် ရှေ့ ကနေ ဦးဆောင်မယ်..ငါတို့ ပြောတာ စီစဉ်တာ လက်ခံရမယ်
နောက်လိုက်ရမယ်…ငြင်းဆန် ကန့် ကွက်တာတွေ မလိုချင် မကြားချင် …..
တန်းတူရည်တူ ဘယ်အခါမှ မဖြစ်စေရ..”…….ဆိုတဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို
တသက်တာလုံး ခံယူရှင်သန်နေသူတွေ အဖို့ တော့ …..
ကိုယ်ကျိုးမဖက် တိုင်းပြည်အတွက် နောင် အနာဂတ်အတွက်
အကြမ်းမဖက် ငြီမ်းချမ်းတဲ့ နည်းနဲ့  တွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေးဖို့  ရိုးသားစွာတောင်းဆိုနေတဲ့ 
မျိုးဆက်သစ် ခွပ်ဒေါင်းတွေနဲ့  ထိပ်တိုက်အတွေ့ …..
မခံချီမခံသာ…အံတကြိတ်ကြိတ် …တောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့ 
လက်သည်းကြား ဆူးတချောင်း စိုက်ဝင်နေသလိုမျိုး ကြုံနေရပါပြီ…..၊၊
ထင်ရာဆိုင်း ငါမှငါ အတ္တအမှားတွေနဲ့  ကျူးလွန်ခဲ့ တဲ့  လွှဲချော်မှုတွေ…
ငါတကောကော အသိညဏ်မဲ့  အဆင်အခြင်မဲ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့  တိုင်းပြည်တခုလုံး
အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်ခဲ့ ရတဲ့  အမှားတွေ…..
ငါ့ မိသားစု ငါ့ ဆွေမျိုး အသိုင်းအဝန်းတစုသက်သက် မတရားကိုယ်ကျိုးရှာ
မတော်လောဘတွေနဲ့  ရှာဖွေစုဆောင်းခဲ့ တဲ့  ဖြစ်ရပ်တွေ……အဖြစ်သနစ်တွေနဲ့ 
ဆင်ဖြူမျက်နှာ ဆင်မဲ မကြည့် ဝံ ဆိုသလို……အနေအထားဖြစ်နေရပြီမို့ 
လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်.. ရှေးအဆက်ဆက် အစဉ်အလာအတိုင်း
ချော့ တဲ့ ဌာနက ချော့  ၊ လီမ်ညာဖြေရှင်းချက်ထုတ်တဲ့ ရုံးကလဲ ကလီမ်ဆင်
ကျေညာချက်ထုတ်ပြန် ၊အပျော့ ဆွဲနဲ့  တွေဝေ ဝေဝါးအောင် မျက်လှည့် ပြနေမဲ့ 
အဖွဲ့ ကလဲ တမျိုးပြီးတမျိုး နည်းပညာတွေ ထုတ်သုံးနေတာ အထင်အရှားပါ…
အရင့် အရင်အာဏာရှင်များစိုးမိုးတဲ့ ခေတ်တုံးကလို လုပ်ရပ်ကမသွေမတိမ်း၊
အမူအကျင့် တခု ၊ အများ(သို့ ) လူတစု လက်ခံထားတဲ့ လုပ်ရပ်တခုဟာ
သုံးစွဲ လက်ခံလာတာကြာလာရင် ဓလေ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာတခု ဖြစ်လာခဲ့ ရသလို
စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက် နှစ်၅၀ကျော် ကျင့် သုံးလာခဲ့ တဲ့ 
ဆွေးနွေးပွဲစနေရင်း တန်းတူအဆင့် တူ အဆင့် ကနေ တဆင့် လျှော ပြောသမျှ
ခေါင်းညိတ်အောင် လက်ခံအောင် တဖက်သပ်လုပ်ဆောင်လာတာတွေ………..
ဆွေးနွေးဖက်ရဲ့  တာဝန်ခံမှု ၊ဦးဆောင်မှု အခန်းကို ဆေးကြောရင်း
သွေးခွဲ ခြေထိုးစကားတွေ ဖန်တီးပြောဆိုလာတာတွေ……..
စကား စကားထဲက ဇာတိပြဆိုသလို ခြိမ်းခြောက်မာန်ဖီစကားပြောဆိုလာတာတွေ…
ဆွေးနွေးအကြောင်းအရာအပေါ် အာရုံပြောင်း ဖန်းတီးလာတာတွေဟာ
နှစ်ပေါင်းကြာလာတော့ လဲ အာဏာရှင်တွေရဲ့ ဓလေ့ ထုံးတမ်းတခု….
အတွင်းသရုပ် သဏ္ဍာန်တခုလို ပုံသေကားချပ်ဖြစ်ခဲ့ ရပြီ…..၊၊
ဒီအခြေ ၊ ဒီဓလေ့  ၊ ဒီအထာကို နားလည်လက်ခံသဘောပေါက်ကြလို့ 
ဒီနေ့  တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရင်းကတဖက် ရည်ရွှယ်မျှော်မှန်းထားတဲ့ ပန်းတိုင်ဆီ
အရောက်ချီတက်တာကဖက် ပြိုင်တူလုပ်ဆောင် တိုက်ပွဲ ဆင်နွဲဖို့ 
မျိုးဆက်သစ် ခွပ်ဒေါင်းတို့ ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အပြည့် အဝထောက်ခံပါတယ်..
မှန်ကန်သင့် လျှော်တဲ့  ဆုံးဖြတ်ချက်တခုလို့  ကောက်ချက်ချ ချီးကြူးပါတယ်…
နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒီနည်း ဒီပုံသေနည်း ဟောင်းနဲ့ ဘဲ
လူတွေ ဘဝတွေများစွာ စွန့် လွတ်ခဲ့  အနစ်နာ ဆုံးရှူံး ခဲ့ တာကို
သင်ခန်းစာအဖြစ်ယူနိုင်ခဲ့ သာမက ရှေ့ ဆက်လျှောက်လှမ်းဖို့  ခွန်အားတခုအဖြစ်
အခြေခံဦးတည်ရည်ရွှယ်ချက်ချနိုင်တာတွေက လေးစားဂုဏ်ယူလို့ မဆုံးအောင်ပါဘဲ..၊၊
ဒီနေ့  ဒေါင်းလုလင် မောင်မယ်တွေက ရိုးသားပေမဲ့  မအ တော့ ပါဘူး…
ဒီနေ့  မျိုးဆက်သစ်တွေက အတွေ့ အကြုံ နဲပေမဲ့  သတ္တိမနည်းတော့ ပါဘူး..
ဒီနေ့  လူငယ်တွေက ပရိယာယ်မကြွယ်ပေမဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရား အပြည့် နဲ့ ပါ..
ဒီနေ့  သူတို့ တတွေ နေပူရှိန်အောက် ပင်ပန်းတကြီး အနာတရဗလဗွေနဲ့ ..
တောင်းဆိုနေတာက နက်ဖြန်အတွက်ပါ အများအတွက်ပါ တိုင်းပြည်အတွက်ပါ…၊
အဲဒီလို ကိုယ်ကျိုးစီးပွားမပါ .. အချုပ်အချာ အာဏာကို မထိပါး….
ရပ်ရွှာအေးချမ်းမှုကိုမထိခိုက် …အခြားသူတပါးရဲ့ အကျိုးစီပွားကို မဖျက်စီး..
ငြီမ်းချမ်းစွာနဲ့  အကြမ်းမဖက် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာဖို့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတာ
ပြည်သူတရပ်လုံး ..လူမူအဖွဲ့ အစည်းတွေအားလုံး သိတယ် မြင်တယ် လက်ခံတယ်
ထောက်ခံတယ်ဆိုတာတွေက သက်သေအထင်အရှား…ငြင်းပယ်ဖြောင့် ဖျက်လို့ မရ၊၊
ဒါတွေ ဒီအဖြစ်တွေ မလွှဲမသွေ ကြုံရတဲ့ အခိုက်အတန့် …
တိုင်းပြည်အတွက် နောင်လာနောင်သားအရေး အတွက်
ကျောင်းသားလူငယ်မောင်မယ် နဲ့ အတူ ပြည်သူတရပ်လုံး
ဖြောင့်မှတ်မှန်ကန်စွာနဲ့  အပေးအယူ အလျှော့ အတင်းတွေနဲ့ 
ညှိနှုန်းအဖြေရှာနိုင်ပါစေလို့ သာ ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ ……..
ကိုယ်ကျိုးမဖက် အများအတွက် ဖြူစင်ရိုးသားစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်တောင်းဆိုနေတဲ့ 
ကျောင်းသားလူငယ်မောင်မယ်တွေ ရဲ့  အရိုးခံတောင်းဆိုမှုတွေကို
အရင့် အရင်ခေတ်စံနစ်ဟောင်းအတိုင်း နောက်ကြောင်းပြန် အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲမယ်..
နှိမ် နင်းချေမှုန်းမယ်…အကြောက်တရားနဲ့ ခြောက်လှန့် တိုက်ခိုက်မယ်ဆ်ုရင်တော့ 
ပြည်သူတရပ်လုံးအနေနဲ့ လဲ ဥပဒေနောက်ကြောင်းပြန် သက်ရောက်မယ်…
သမိုင်းကံကြမ္မာ တပတ်လှည့် မယ်……
ဒုတိယ ဒီပဲရင်းအတွက် ဒုတိယနူရင်ဘတ် ပေါ်ပေါက်လာမှာတော့ 